Zvinodiwa kuti uchinjise kune zvemagetsi zvekutengeserana | ECommerce nhau
Zvinodikanwa kuchinjisa kune e-commerce
Jose Ignacio | | Marketing, Kutengeswa kweIndaneti
Zvemabhizimusi zvekutengesa zvazova imwe yedzimotokari uko kutengesa kwezvigadzirwa kana masevhisi anopihwa nemakambani anoendeswa. Zvinoenderana nezvidzidzo zvakasiyana zvemusika, vanoratidza kuti yavo yemusika mugove iri kufambira mberi gore negore uye kunyangwe kusvika padanho re46%.
Iyo yemhando yekushambadzira iyo ine yepamusoro soro pakati pevadiki chikamu chevanhu. Kunyanya kunyaradzo inomiririra ivo kuti vatenge zvavanotenga kubva kumba kwavo kana chero imwe nzvimbo kwavanenge vari panguva iyoyo. Kune rimwe divi, kune iyo yemari maficha emabhizinesi mashandiro. Mupfungwa yekuti vanogona Chengetedza mari mukugadziriswa kwemirairo iyi. Nekuda kweichi chiito, hapana mubvunzo kuti mukupedzisira iwe unenge uine chakasimba chakasimba muaccount yako account.
Asi chero zvazviri, kune mimwe mipiro yaunofanirwa kuunganidza kuti uve mushandisi wekutengesa zvemagetsi. Uye kuti kubva panguva dzino iwe uchazoziva kuitira kuti iwe unzwe kunzwa uchizivikanwa neiyo chimiro iyo yatiri kuzokufumura iwe inotevera.
1 Nhoroondo ye e-commerce vashandisi
2 Chinja kune inodiwa nzira yekubhadhara
3 Chaizvoizvo zvinodiwa pakati pevashandisi
4 Kushandiswa kwezvigadzirwa zvemagetsi
5 Zvakanakira mashandiro epamhepo
6 Zvikamu umo iwe kwaunogona kuvandudza kutenga?
Nhoroondo ye e-commerce vashandisi
Imwe yehunhu hwako hwekutanga ndeyekuti iwe unofanirwa kuve uri kuvhura kune zvitsva zviitiko mundima yekutengesa. Iwe haufanire kuve munhu akatsiga anofunga kuti iyo chete chiteshi yekutenga zvigadzirwa kana masevhisi iri kuburikidza nemuviri kana kumeso-kumeso zvitoro.
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuve unofarira kugadzira zviitiko zvitsva mune rezvokutengeserana chikamu. Iko kunokosha kwazvo kuti kubva ikozvino uchienda kune yakawanda yekufarira mune yerudzi urwu rwekutenga uye inzvimbo inodiwa yezvaunoda mune tsika yekushandisa.
Chinja kune inodiwa nzira yekubhadhara
Iwe haugone kuisa yakawanda kukosha pane ichi chinhu kumberi. Asi hapana mubvunzo kuti ine zvakawanda. Pane mamwe mapuratifomu edhijitari, ivo vangatoda fomati ye electronic payment inoshandiswa mukirasi iyi yekushanda. Kana iyi isiri yako, hauzove nesarudzo kunze kwekunyoresa sevhisi.
Usakanganwa kuti iyi yakasarudzika nzira yekubhadhara iri kuve yakakosha mune mazhinji epamhepo mapuratifomu. Kunze kwekuvhiya kunoitwa nenzira dzakajairika, senge, semuenzaniso, kiredhiti kana makadhi ekubhengi. Izvo kune rimwe divi, hazvifanirwe kunge zvichishayikwa mune yako portfolio
Zvinoenderana nezvidzidzo zvakasiyana, parizvino inopfuura hafu yekutenga pamhepo inoitwa neazvino zvigadzirwa zvemagetsi. Chengeta izvi mupfungwa kana iwe usiri kuda izvo nekuda kwechiitiko ichi haugone kutenga kwako uye zvishoma nekukurumidza uye zvakachengeteka.
Chaizvoizvo zvinodiwa pakati pevashandisi
Imwe pfungwa yakasimba muprofita yemushandisi kana mutengi ndeyekuti ivo vanonzwa vachida kuita kuti kutenga kuitwe zviri pamutemo, asi kunze kwekudikanwa. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kukudziridza akateedzana ezvakakosha mukutenga. Semuenzaniso, ndezvipi zvigadzirwa zvaunoda, ndeipi bhajeti iwe yaunoda, kangani iwe raira online, nezvimwe.
Nepo chimwe chikamu, chikamu chepfungwa chezviito ichi chinokanganisawo. Mupfungwa yekuti iwe unoziva izvo chaicho zvido zvaunazvo kubva zvino zvichienda mberi. Zvekuti nenzira iyi iwe uri muchinzvimbo chekuita zvimwe zvimiro pane ako maitiro mune yevatengi chikamu. Beyond imwe nhevedzano yehunyanzvi kufunga kweichi chakasarudzika maitiro.
Kushandiswa kwezvigadzirwa zvemagetsi
Ichi ndicho chimwe chinhu chaunofanira kufunga nezvacho kana pakupera kwezuva iwe uchizotenga zvekutenga zvemadhijitari kana mumhando yepamhepo. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuunganidza kudzidziswa mukushandisa izvi zvigadzirwa zvehunyanzvi. Mupfungwa iyi, zvinodikanwa kuti iwe wajaira kuita mashandiro nehunhu uhu.
Zvese zviri maererano nemakomputa ako ega, pamwe nezvimwe zviridzwa zvemberi, senge mbozhanhare kana mapiritsi pachawo. Iwe unofanirwa kuve nyanzvi yechokwadi mukubata kwayo uye uchida kufambira mberi munguva pfupi.
Izvo zvakare zvakakosha kuti iwe uteedzere mamwe marongero echiito isu atinokufumura iwe pazasi.
Usave mutorwa kune chero yeiyo zvigadzirwa zvetekinoroji izvo zvinowanikwa mumusika.
Chokwadi ruzivo mukushanda online izvo zvinoda chero eaya matekinoroji zvishandiso.
Iva wakavhurika kune nyowani ruzivo matekinoroji. Uine kudzidza chaiko mumakore achangopfuura.
Iva ne zvinodiwa michina kuita zvebhizimusi mashandiro eaya maitiro. Zvese zvakagadziriswa uye nhare mbozha.
Uye pakupedzisira, anoda kudzidza munzvimbo iyi yekutaurirana. Kune iyo poindi ndeyekuti iwe unofanirwa kupindira mavari, kana kanenge mazhinji acho.
Zvakanakira mashandiro epamhepo
Muzviitiko zvese, zvakakosha kuti iwe uzive kuti zvakanakirei mashandiro aya ari mumunda wekushandisa. Semuenzaniso, mamwe eaya atinokuraira kubva ikozvino.
Iwo anowanzo kuve mashandiro zvinobatsira kupfuura izvo zvinoitwa kuburikidza neakajairika kana echinyakare makwara.
Ivo vanogona kufungidzira iwe wakakosha kwazvo kuchengetedza pane zvakatengwa zvinoitwa uye kuti mune dzimwe nguva vanogona kufungidzira zvinopfuura makumi maviri muzana zvemutengo wekupedzisira kubva zvakafanana.
Usakanganwa kuti iro ramangwana rekutenga uye nekudaro uchafanirwa kujairira iwo ma mechanics e online mashandiro. Pasina dzimwe sarudzo padhuze dzinozoita kuti uchinje pfungwa dzako kubva panguva dzino chaidzo.
Iyo muenzaniso unobatsira kwazvo kutsvaga mamodheru kana zvigadzirwa izvo havapo mukupa kwepanyama kana kuti zvirinani zvinotora basa rakawanda kuti riite.
Kunaka ndechimwe chezvikonzero zvinoita kuti vashandisi kana vatengi vasarudze mhando iyi yekutengesa mashandiro Kwete pasina, haufanire kuita nzendo kune chero nzvimbo uye iwe unogona zvakare kuisa maodha chero nguva, kunyangwe husiku kana pakupera kwevhiki. Nguva umo zvitoro kana kumeso-kumeso mabhizinesi anovhara.
Mapuratifomu mazhinji epamhepo 100% kuvimbisa mashandiro kuti iwe uchazokudziridza nenzira dzakasiyana dzekubhadhara. Izvo hazvina basa nehunhu hwayo, kubva kuchikwereti kana makadhi ekubhadharira kune kunyoreswa neinotsigira tekinoroji. Pasina kubvisirwa chero mhando.
Iwe unokwanisa kuwana dzakasiyana siyana inopa uye kukurudzira izvo zvinokubatsira iwe kuisa odha munzvimbo yakachengeteka, yakavimbiswa uye pamusoro penzira dzose dzinokurumidza kwazvo. Kubva pane chero mhando yekutengesa nzira iwe yaunogona kugutsa yako chaiyo zvinodikanwa mune zvevatengi maitiro.
Zvikamu umo iwe kwaunogona kuvandudza kutenga?
Ehezve, muchinhu ichi hauna kana ganhuriro dzerudzi rwupi zvarwo. Kana zvisiri, pane zvinopesana, zvinokanganisa zvikamu zvese zvehunyanzvi, kubva kumatekinoroji matsva kusvika kune zvekudzidzisa kana zvekudzidzisa. Pasina kukanganwa zvese zvinyorwa kana zvigadzirwa zvine chekuita nenyika yezvipfeko: zvishongedzo, shangu, zvipfeko kana kusimbiswa mune zvipfeko. Zvese zvine nzvimbo munzvimbo yekutengesa yedhijitari.
Nekuwedzera kunoshamisa mukupa uko makambani epamhepo akagadzira munguva dzichangopfuura, sezvaungaona wega kubva ikozvino. Nekuda kweiyi nzira yekutengesa, iwe semutengi, iwe uchave iwe unonyanya kubatsirwa neiyi maitiro mukati mekudyiwa kwepasirese. Nekuti mukuita, iwe unenge uine zvese zvaunoda muruoko rwako. Kubva pakutenga nharembozha kusvika kushangu dzekumhanyisa dzauchatambira mumba mako nemari pakuburitsa.
Nepo kune rumwe rutivi, zvichagara zvichireva nzira yekubuda kune chimwe chinhu chaunoshaya muhupenyu hwako hwezuva nezuva uye icho chinongoda chete zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi uye nzira yekubhadhara kuti uite kubhadhara kweichi chiitiko. Zvishoma nezvishoma zvekuti iwe unokwanisa kuve mutsva mutengi wedigital chikuva cheaya maficha. Pasina kudiwa kwekuzvipira kuita mamwe mabhizimusi mashandiro. Chete izvo izvo zvaunoda kana kufunga zviri nyore kuti ugadzikise kuburikidza neiyi yekushambadzira chiteshi.
Zvekuti pakupedzisira isu tese tinosvika nhevedzano yemhedziso nezve izvo chaizvo kuchinjika kune zvemagetsi commerce zvinoreva. Uye pakati padzo zvinotevera kumira:
Zvinokutora iwe kuenda kune rakasiyana chikamu icho chichava kuunza nyaradzo uye zvakarezve nemakwikwi mitengo kana uchitenga zvigadzirwa zvako.
Izvo zvinokutendera iwe gadzirisa zvese zvawakatenga kubva pakombuta wega kana chimwe chigadzirwa chehunyanzvi.
Tichafunga izvozvo haufaniri kumirira kwenguva yakareba kuitira kuti iwe uve pamba odha yawakatumira kune online chikuva.
Haisi maitiro zvakaoma kwazvo kuzadza sezvo ichiwanika kune ese mushandisi kana vatengi ma profiles.
Iyo tsika mukushandisa iyo iwe yaunogona kutsigira nekutenga muzvitoro zvemuviri zvechinyakare hunhu.
Kuburikidza nhevedzano yezviyero zvekuchengetedza izvo makambani anga achiteedzera mumakore achangopfuura kuitira kuti iwe usave nechero mhando yematambudziko ebasa. Chinhu icho mushure mezvose iwe chauri kutsvaga zvakanyanya kuomarara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Zvinodikanwa kuchinjisa kune e-commerce
Cryptocurrencies mune ecommerce
Vatengi profiles mu e-commerce